मेस्सीकाे फुटबल साम्राज्य ! - Khelpati
सोमवार, आश्विन ५, २०७७
मेस्सीकाे फुटबल साम्राज्य !
बुधवार, असार १०, २०७७ अनिश भट्टराई
एजेन्सी । अर्जेन्टिनी फरवार्ड तथा बार्सिलोनाका स्टार लियोेल मेस्सी फुटबलका सर्वश्रेष्ठ खेलाडीमा गनिन्छन् । मेस्सीले आफ्नो खेल जिवनमा अनेकौ कीर्तिमान बनाएका छन् । मेस्सीले सर्वाधिक ६ पटक फिफा बालोन डी ओर अवार्ड र ६ पटकनै गोल्डेन बुट जितेका छन् ।
उनले बार्सिलोनाका लागि ३४ ट्रफी जितेका छन् । जसमा १० ला लिगा, ४ युएफा च्याम्पियन्स लिग, ६ कोपा डेल रे छन् । उनको नाममा ला लिगामा सर्वाधिक बढी गोल (४४०), सर्वाधिक बढी ह्याट्रिक (३६) रहेको छ । मेस्सीले बुधबार आफ्नो ३३ औँ जन्मदिन मनाउँदै छन् ।
मेस्सीको पूरा नाम लियोनल आन्द्रेस मेस्सी कुचिटिनी हो । उनको जन्म सन् १९८७ जुन २४ का दिन रोसारियोमा भएको थियो । उनका पिता जर्ज मेस्सी स्टिल फ्याक्ट्रीमा म्यानेजरको काम गर्दथे भने आमा सेलिया कुचिटिनी चुम्बक उद्योगमा काम गर्थिन् ।
फुटबल प्रेमी परिवारमा जन्मेका मेस्सीमा सानैदेखि फुटबलको नशा चढ्यो । उनी आफ्ना दाइहरु रोड्रिगो र माटियाससँग खेल्ने गर्थे । उनका अरु साना बुबाका सन्तान समेत फुटबलरनै बनेका थिए ।
मेस्सीले ४ वर्षको उमेरमै स्थानीय क्लब ग्राण्डोलिमा भर्ना भएका थिए । सो क्लबमा मेस्सीका पिता जर्जले प्रशिक्षण दिने गर्दथे । उनलाई सानोमा सबभन्दा बढी प्रभाव उनकी मामाघरकी आमा सेलियाले पारेकी थिइन् । मेस्सीलाई ट्रेनिङ ग्राउन्डसम्म ल्याउने लैजाने तथा ट्रेनिङमा उनैले सहयोग गर्थिन् ।
मेस्सीले आफ्नो ११ औँ जन्मदिन मनाउनु अघि उनकी हजुरआमा सेलियाको निधन भयो । सो शोकले मेस्सीलाई निकै प्रभाव पा¥यो ।
त्यसपछि मेस्सीले आफुले गर्ने गोलपछि आकाशतर्फ इशारा गर्दै सेलियालाई गोल समर्पण गर्ने गरेका छन् ।
ग्राण्डोलिमा भर्ना भएको दुई वर्षपछि मेस्सी न्येवेल्स ओल्ड ब्वाइज क्लबमा आवद्व भए । उनले त्यहाँ छ वर्ष खेले । ६ वर्ष खेल्दा उनले क्लबका लागि करिव ५ सय गोल गरेका थिए । उनी ‘दि मेम्बर अफ ८७’का सदस्य थिए । सो नाम ती खेलाडीको जन्म वर्षका आधारमा दिइएको थियो ।
खेलमा रमाईरहेका मेस्सीको १० वर्षको उमेरमा खेल जिवनमै पुर्णविराम लाग्ने खतरा बढ्यो । मेस्सीमा शारीरिक विकास हार्मोनको कमी देखिएको थियो । आफ्ना पिता जर्जको स्वास्थ्य बिमाका कारण उनले दुई वर्षसम्म त उपचार पाए तर त्यसपछि भने थप समस्या निम्तने देखिन्थ्यो । एक महिनाको अन्तरालमा मेस्सीको उपचारका लागि कम्तिमा १ हजार अमेरिकी डलर खर्च लाग्थ्यो ।
न्येवेल्सले सुरुमा मेस्सीको उपचार खर्च व्यहोर्ने बाचा गरेपनि पुरा भने गरेन । उनलाई अर्जेन्टिनाकै अर्को क्लब रिभर प्लेटले उपचार गर्ने बताए पनि आर्थिक कमजोरीका कारण पूरा गर्न सकेन । रिभर प्लेटमा मेस्सीले आफ्नो आदर्श मान्ने पाब्लो आइमर पनि खेल्ने गर्दथे । मेस्सीको सानैबाट अर्का आदर्श भने ब्रजिलियन फरवार्ड रोनाल्डो हुन् ।
मेस्सीको उपचार त्यहाँ सम्भव नभएपछि उनको परिवार यस्तो क्लबको खोजीमा थिए, जहाँ मेस्सीले उपचार पनि पाउथे र खेल्न पनि । मेस्सीका नातेदार क्याटालोनियामा थिए । उनै नातेदारले क्याटलन क्लब बार्सिलोनाम मेस्सीका लागि ट्रायल दिने जमर्को मिलाए ।
सन् २००० को सेप्टेम्बरमा ट्रायलका लागि कुरा मिलेपछि बार्सिलोनाका डाइरेक्टर चार्ली रेकाचले मेस्सीलाई तत्काल बार्सिलोनामा अनुबन्ध गराउन चाहन्थे । तर त्यो समय युरोपेली क्लबले साना विदेशी खेलाडी नकिन्ने भएका कारण बार्सिलोनाको बोर्ड हच्किएको थियो ।
तर चार्लीको बढ्दो दबाबका कारण १४ डिसेम्बरमा बार्सिलोनाले मेस्सीसँग सम्झौता गर्यो । त्यतिबेला कुनै पनि ‘पेपर डकुमेन्ट’ नभएका कारण बार्सिलोनाले मेस्सीसँग ‘न्यापकिन’मानै सम्झौता गरेका थियो
दुई महिनापछि सन् २००१ फेब्रुअरीमा मेस्सीका परिवार बार्सिलोनामा बसाइँ सराइ गरे । मेस्सीका परिवार बार्सिलोनाको मैदान क्याम्प नोउ नजिकै अपार्टमेन्ट लिएका थिए । बार्सिलोना गएको पहिलो वर्ष मेस्सीले धेरै खेल खेल्न पाएनन् । न्येवेल्सबाट बिदेशी खेलाडी लगेपछि क्याटलन लिग र मैत्रीपुर्ण खेलमात्र खेल्न पाए ।
थोरै खेल खेल्न पाएपछि उनी टिममा घुलमिल हुन पाएनन् । थोरै बोल्ने मेस्सी आफ्नो टिमका कसैसँग बोल्दैनथे । त्यसैले टिमका साथीले मेस्सी बोल्न नसक्ने समस्या रहेको शंका गरेका थिए । यता उनी घरमा हुँदा पनि न्यास्रो मान्न थालेका थिए । उनकी आमा र दुई दाइ तथा बहिनी रोसारियो फर्किएपछि उनलाई सन्चो भएको थिएन ।
बार्सिलोनाको युथ एकेडमी ला मासियामा भर्ना भएको एक वर्षपछि उनी फेब्रुअरी सन् २००२ मा रोयल स्पेनिस फुटबल फेडेरेसनमा आवद्द भए । यसले मेस्सीलाई जुनसुकै प्रतियोगिता खेल्न सक्ने बाटो खोलिदिएको थियो । त्यसपछि उनको मित्रता सेस फाब्रिगास र जेरार्ड पिकेसँग भएको थियो । १४ वर्षको उमेरमा रोग निको भएपछि उनी बार्सिलोनाको टोलीका महत्वपूर्ण सदस्य भए ।
सन् २००२–२००३ को सिजनमा मेस्सी बार्सिलोनाको युवा टोलीका सर्वाधिक गोलकर्ता बने । उनले त्यस सिजनमा ३० खेलमा ३६ गोल गरेका थिए । सो सिजनको अन्त्यमा मेस्सीलाई आर्सनलले अनुबन्ध गर्न चाहेको थियो तर उनी बार्सिलोनामै रहे । उनका साथीद्वय फाब्रिगास र पिके बेलायत लागे ।
बार्सिलोना गएको चौथो बर्ष सन् २००३–०४ को सिजनमा मेस्सीले निकै ठुलो सफलता प्राप्त गरे । बार्सिलोनाको युथ क्लबको वरियतामा उनी निकै माथी पुगे । एकै सिजनमा उनले बार्सिलोनाको ५ वटा क्लबमा खेले । बार्सिलोनाको पहिलो टिमका खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय ब्रेकमा गएको बेला मेस्सी सहित युवा टिमका अन्य खेलाडीले पहिलो टिममा प्रशिक्षण गर्ने मौका पाएका थिए ।
फ्र्यांक रिज्कार्डको टिममा उनले देखाएको खेलबारे फ्रेन्च विंगर लुडोभिक ग्युली भन्छन्, ‘उनले हामी सबैलाई हराएका थिए । उनले हामीलाई नछलुन भनेर हामी उनमाथि जथाभावी फल खेल्थ्यौ । तर उनी उठ्थे र फेरि छलाउन थाल्दथे । उनले गर्दा हाम्रो टोलीका डिफेन्डरनै चिन्तित बनेका थिए । उनी मानव होइनन्, एलियन हुन् ।’
उनले बार्सिलोनाका लागि १६ वर्ष चार महिनाको उमेरमा डेब्यु गरेका थिए । सन् २००३ नोभेम्बर १६ मा पोर्टोसँगको मैत्रीपुर्ण खेलमा मेस्सीले डेब्यु गरेका थिए । खेलको ७५ औँ मिनेटमा छिरेका उनले त्यस खेलमा दुई ठुला मौका बनाएका थिए । यसले टिमका प्राविधिकहरुलाई प्रभाव पार्यो । उनी त्यसपछिं टिमको ‘रिजर्ब साइड’मा पर्न थाले ।
बार्सिलोनाको पहिलो टिमसँगको प्रशिक्षणले उनलाई रोनाल्डिन्होसँग चिनाईदियो । रोनाल्डिन्होले मेस्सीलाई आफ्नो भाई माने र उनलाई सहयोग गर्न थाले । रोनाल्डिन्होले त्यसबेला मेस्सी आफु भन्दा पनि उत्कृष्ट खेलाडी बन्ने विश्वास जनाएका थिए ।
सन् २००४–२००५ को सिजनमा मेस्सी बार्सिलोनाको बी टिमका प्रमुख खेलाडी बनेका थिए । पोर्टोसँगको खेलपछि उनले बार्सिलोनाको सिनियर टिमका लागि खेल्ने मौका पाएका थिएनन् । तर सन् २००४ को अक्टोबरमा सिनियर टिमका खेलाडीले मेस्सीलाई पनि आफुहरुसंग मौका दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
खेलाडीको चाहना स्वरुप रिज्कार्डले मेस्सीलाई सिनियर टिममा बढुवा गरिदिए । मेस्सीलाई रिज्कार्डले दाहिने भागबाट खेल्न लगाए । मेस्सी बिचबाटनै खेल्न चाहन्थे । मेस्सीले ला लिगामा १६ अक्टोबरमा ईस्प्यानियोलसंगको खेलमा डेब्यु गरे । खेलको ८२ औं मिनेटमा मैदान छिरेका उनी बार्सिलोनाका कान्छा खेलाडी बने ।
बैकल्पिक खेलाडीको रुपमा उनले ९ खेलमा ७७ मिनेट खेल्ने मौका पाए । त्यसबीच उनले युईएफए च्याम्पियन्स लिगमा सख्तर डोनेस्कविरुद्ध डेब्यु गरेका थिए । उनले बार्सिलोनाको लागि पहिलो गोल भने सन् २००५ मे १ मा गरेका थिए । रोनाल्डिन्होको पासमा मेस्सीले बार्सिलोनाको सिनियर टिमबाट पहिलो गोल गरेका थिए । उनी बार्सिलोनाका लागि गोल गर्ने सबैभन्दा कान्छा खेलाडी बनेका थिए ।
उनले आफ्नो १८ औँ जन्मदिनमा बार्सिलोनासँग पहिलो ब्यवसायीक सम्झौता गरेका थिए । सो सम्झौताले उनी सन् २०१० सम्म बार्सिलोनामै रहने पक्का गरेको थियो । उनले सन् २००५ अगस्टमा पहिलो बार्सिलोनाको सुरुवाती ११ मा स्थान पाए । जोन ग्याम्पर ट्रफीमा युभेन्टससँगको खेलमा उनी पहिलो पटक सुरुवाती सेटमा खेल्ने मौका पाएका थिए । उनले सो खेल निकै उत्कृष्ट खेलेका थिए र क्याम नाउमा ‘स्ट्यान्डिङ ओभेसन’ पनि पाए ।
त्यस खेल पश्चात युभेन्ट्सका प्रशिक्षक कापेलोले मेस्सीलाई लोनमा युभेन्टस लाने प्रस्ताव राखेका थिए । यस्तै अर्को इटालियन क्लब इन्टर मिलानले उनका लागि ठूलो प्रस्ताव राखेको थियो ।
उनीमाथि १५० मिलियन पाउण्डको रिलिज क्लोज सहित बार्सिलोनामा पाउने भन्दा ३ गुणा बढी तलब दिने इन्टरले जनाएको थियो । बार्सिलोनाका तत्कालीन अध्यक्ष जोआन लोपार्टाका अनुसार योनै मेस्सी गुमाउन सक्ने पहिलो र अन्तिम खतरा रहेको थियो । तर मेस्सीले सो प्रस्ताव मानेनन् ।
उनले १९ नम्बरको जर्सी लगाएर खेल्न थालेका थिए । उनले आफुलाई विंगरको रुपमा स्थापित गराए । रोनाल्डिन्हो र स्यामुयल इटोसँगको उनको जोडी निकै खतरनाक बन्यो । सन् २००६ को सिजनमा २५ खेलमा ८ गोल गरेका मेस्सीको सिजन भने पूरा गर्न पाएनन् । खुट्टाको चोटका कारण उनले मैदान बाहिर बस्नु परेको थियो । सन् २००६ को च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा आर्सनललाई हराउँदा उनी नखेलेका कारण टिमसँग खुशीयाली समेत मनाएका थिएनन् ।
२० वर्षको उमेरमै मेस्सी बार्सिलोनाका स्टार बनिसकेका थिए । उनलाई स्पेनिस मिडियाले ‘मसिहा’ उपमा दिएका थिए । सन् २००७ मा उनी फिफा बालेन डी ओर अवार्डमा तेस्रो भएका थिए भने फिफा बर्ष खेलाडीमा दोश्रो भएका थिए । तर उनले त्यस सिजन पनि चोटका कारण पुरै खेल्न पाएका थिएनन् ।
सन् २००६ देखि २००८ सम्म उनी ८ महिना चोटका कारण मैदान बाहिर बसेका थिए । दुई खराब सिजनपछि प्रशिक्षक रिज्कार्ड बर्खास्त भए भने रोनाल्डिन्हो बेचिए । रोनाल्डिन्होको प्रस्थान लगत्तै मेस्सीले बार्सिलोनामा १० नम्बरको जर्सी प्राप्त गरे । लगातार चोट बोकेका कारण मेस्सीलाई बार्सिलोनाले नयाँ तरिकाबाट प्रशिक्षण सुरु गरायो । उनीसँग एक सहजकर्ता समेत राखिएका थिए, जो उनीसँगै हिड्न थाले । यसले गर्दा उनले कम चोट बोके ।
उनले सन् २००८ मा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरे पश्चात फिफा बालेन डी ओर र फिफा बर्ष खेलाडी अवार्डमा दोस्रो भएका थिए ।
सन् २००९ मा पेप ग्वार्डीओलाको प्रशिक्षणमा खेल्न लागेपछि उनको खेल झनै उत्कृष्ट बन्यो । मेस्सीले त्यस सिजनमा पहिलो पटक २२ बर्षको उमेरमा फिफा बालेन डी ओर र फिफा बर्ष खेलाडीको अवार्ड जिते । त्यस सिजन बार्सिलोनाले मुख्य ६ उपाधि जितेको थियो ।
सन् २०१० को सिजनमा पनि मेस्सीको खेलमा थप सुधार भयो । उनले त्यस सिजनमा ४७ गोल गर्न सके । सन् २०१० को च्याम्पियन्स लिगमा सेमिफाइनलबाटै बाहिरिए पनि मेस्सी प्रतियोगिताको सर्वाधिक गोलकर्ता बने । उता, ला लिगामा एकै सिजनमा ३४ गोल गर्दै बार्सिलोनालाई लिग जिताए । सो सिजन पनि उनले फिफा बालेन डी ओर जितेका थिए ।
सन् २०११–१२ को सिजनमा उनी निकै उत्कृष्ट खेल खेले । उनले त्यस सिजन ७३ गोल गरेका थिए । थप २९ गोलका लागि सहयोग गरेका थिए । बार्सिलोनालाई स्पेनिस सुपर कप र युरोपियन सुपर कप जिताए ।
यस्तै, फिफा क्लब विश्वकपको फाइनलमा उनले दुई गोल गरेका थिए । उनले त्यस प्रतियोगितामा गोल्डेन बल जिते । उनले त्यस वर्ष पनि बालेन डी ओर जित्न सफल भएका थिए । त्यसबेला देखि नै मेस्सीलाई म्यारोडोना र पेले बराबरको खेलाडी मानिन थालिएको हो ।
सन् २०१२ को सिजनमा मेस्सी उत्कृष्ट खेले पनि बार्सिलोनाले उल्लेख्य प्रर्दशन गर्न सकेन । प्रशिक्षक ग्वार्डीओलाले राजिनामा दिए । बार्सिलोनाले त्यस सिजन कोपा डेल रे जित्नु बाहेक अरु केही गर्न सकेन । तर उनले सोही बर्ष सर्वाधिक गोलकर्ताको कीर्तिमान तोडिदिए ।
बायर्न म्युनिकका जर्ड मुलरले गरेको ८५ गोलको कीर्तिमान मेस्सीले तोडेका थिए । उनले त्यस सिजन कीर्तिमानी ९१ गोल गरे । उनले गिनिज बुकमा पनि नाम दर्ता गर्न सफल भए । त्यस सिजन समेत उनले फिफा बालेन डी ओर जित्दै ४ पटक अवार्ड जित्ने पहिलो खेलाडी बनेका थिए ।
सन् २०१३ को सिजनमा मेस्सीलाई चार बर्ष अघिको चोट बल्झियो । तर पनि उनी खेलिरहे । उनले सो सिजनमा ६० गोल गर्न सके र कीर्तिमानी तेस्रो पटक युरोपियन गोल्डेन बुट जिते । उनी सो सिजनमै ५ पटक घाइते भएका थिए ।
सन् २०१४ मा उनले क्लबका लागि मात्र ४१ गोल गर्न सके । त्यस सिजन बार्सिलोनाले कुनै पनि प्रतियोगिता जित्न सकेन ।
सन् २०१५ को सिजन भने मेस्सीका लागि खास रह्यो । नयाँ प्रशिक्षक लुईस एनरिकेको प्रशिक्षणमा बार्सिलोनाले ऐतिहासिक ट्रेबल जित्यो । च्याम्पियन्स लिग जित्ने क्रममा मेस्सीले १० गोल गर्न सके । उत्कृष्ट प्रदर्शनले उनलाई यूईएफएको उत्कृष्ट खेलाडी अवार्ड जितायो ।
सन् २०१६ को सिजन मेस्सीले ४१ गोल र २३ एसिस्ट गर्न सके । सन् २०१७ मा कुल ५४ गोल र १६ एसिस्ट गरेका मेस्सीले चौथो पटक गोल्डेन बुट जित्न सके । त्यसयता मेस्सीले कुल ६ गोल्डेन बुट र ६ पटक बालेन डी ओर जितेका छन् ।
मेस्सी अर्जेन्टिनाका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी हुन् । उनले अर्जेन्टिनाका लागि सर्वाधिक ७० गोल गरेका छन् । तर मुख्य प्रतियोगितामा उनले अर्जेन्टिनाबाट सफलता पाएका छैनन् । युवा स्तरमा मेस्सीले सन् २००५ को यू–२० विश्वकप जितेका थिए ।
सन् २००५ मै उनले अर्जेन्टिनाको सिनियर टिमका लागि डेब्यु गरे । सन् २००६ को फिफा विश्वकपमा गोल गर्ने उनी कान्छा खेलाडी बनेका थिए । मेस्सी सन् २००७ को कोपा अमेरिका फुटबलमा प्रतियोगिताका उत्कृष्ट युवा खेलाडी बने ।
मेस्सीले सन् २०११ अगस्टमा अर्जेन्टिनी टोलिको कप्तानको जिम्मेवारी पाएका थिए । त्यसपछि उनले अर्जेन्टिनालाई ३ पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको फाइनमा पुर्याएका छन् । उनकै कप्तानीमा अर्जेन्टिनाले सन् २०१४ को विश्वकप फुटबलको फाईनल, सन् २०१५ र १६ को कोपा अमेरिका फुटबलको फाइनल खेलेको थियो । तर कुनै जित्न भने सकेन ।
सन् २०१९ मा फोब्सका अनुसार मेस्सी सबैभन्दा बढी कमाई गर्ने खेलाडी थिए । यस्तै सन् २०२० मा मेस्सी पहिलो पटक ‘लौरियास वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी’बाट सम्मानित हुने पहिलो फुटबलर बनेका थिए ।
म्याच फिक्सिङ प्रकरण – कानुनको अभावमा उन्मुक्ति
५३ वर्षका व्यावसायिक फुटबलर !
मेस्सी अब कता ?
कस्तो हुँदैछ महिला खेलाडीको तीज ?
‘कसरत गरेरै कोरोना ठिक पार्छु’
सिटीलाई उल्भ्सको चुनौती
आईपीएल : हैदराबाद र बैंगलोर भिड्दै
लाइपजिगको विजयी सुरुवात